जगदीशदाइलाई मेरो नाम थाहा भएन,(शर्मिला खड्का दाहाल)
गुरुकुलमा कवि ठाकुर बेलबासेको कविता सङ्ग्रह 'अचानक एक साँझ'को कार्यक्रम सकेर म वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश घिमिरेज्यूसँग उहाँको गाडीमा साहित्यकार झमक घिमिरेको घर जाँदै थिएँ ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
गुरुकुलमा चारवटा सीटमा एउटामा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यू, अर्कोमा जगदीश घिमिरेज्यू र अर्कोमा कवि द्वारिका श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्थ्यो भने एउटा सिट खाली थियो । पुस्तक विमोचनको प्रतीक्षामा सबै साहित्यकारहरू उठेर नै गफ गर्दै थिए ।त्यो खाली सिट देखेपछि कतै सिटले नै आफ्नो अपमान भएको महसुस गर्ला कि भनेर मैले उहाँसँग बस्ने अनुमति मागेँ । उहाहरूले 'बस्नुहोस् न' भनेर भन्नुभयो । म माधव घिमिरेज्यूको छेउमा बस्न पुगेँ । म बस्न लाग्दा उहाँले सिट आफूतिर तान्दै नजिक बसाउनुभयो । उहाँले जगदीश घिमिरेज्यूलाई संकेत गर्दै भन्दैभयो- "हामी दुवै बालसाहित्यकार-बालसाहित्यकार एकै ठाउँमा बसौं हुन्न ।"
मैले- "हुन्छ" भनेँ ।
यसो त माधव घिमिरेज्यू – (मबुवा भन्छु) ले मलाई देख्नेबित्तिकै हातले तानेर धेरै आशीर्वाद दिनुहुन्छ । अनि वरिपरि फोटो खिच्नेहरू छन् भने 'हाम्रो फोटो खिच' भन्नुहुन्छ । यदि अरू नै मानिसहरू छन् भने 'उहाँ राम्रो बालसाहित्यकार' भनेर परिचय गराउन थाल्न हुन्छ । उहाँको यो आशीर्वचन मेरा लागि सधैँ हौसला र प्रेरणाका प्रेरक तत्व बनेका छन् ।
म उहाँको छेउमा बसेर अब चूप लाग्न सकिनँ । मैले उहाँको स्वास्थ्यको बारेमा सोधेँ । उहाँले 'राम्रो छ' भन्न् भयो ।' मैले क्रमश गफको पोटरी खोल्न थालेँ । मैले भने- "मेरो सासू चौरानब्बे वर्ष हुनुहुन्थ्यो । मसँगै हुनुहुन्थ्यो । अहिले बित्नु भयो ।"
उहाँले भन्नुभयो- "म ब्यानब्बे वर्ष भएँ ।"
यसरी हामी बीच वार्तालापको श्रृङ्खला सुरु भयो । मैले आफूसँगै भएको पुस्तक 'समयको क्यानभासमा' देखाएँ । जगदीश घिमिरेज्यू मन लागि नलागि हाम्रो गफ सुन्दै हुन्थ्यो । साथै प्रशंसकहरूको शुभेच्छा र अभिवादन लिन पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ।
मैले जगदीश घिमिरेज्यूलाई फोकस गरेर भने- "दाइ, यो समयको क्यानभासमा रिलेटेड भएर मेरो ठूलो पुस्तक कथोपन्यास आउँदैछ ।"
जगदीश दाइले भन्नुभयो- "कस्तो, उपन्यास र कथा मिलेको ?"
मैले 'हो' भने । जगदीश दाइले यसरी चासो लिएर बेाल्नुभएपछि म अलिक हौसिँदै कथोपन्यासको बढाइं गर्न थालेँ- "यो पुस्तकलाई मैले महाआख्यान भनेको छु । यसभित्र कथा, कविता, समालोचना निबन्ध सबै हुनेछन् ।"
मैले यसो भन्दा जगदीशदाइले खासै प्रतिक्रिया दिनु भएन । मैले पनि अलिक बढी खोकेकी जस्तो लाग्यो अनि चूप लागेँ।
यसरी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग कुर्सी बसेर गफ गर्न पाउदा आफूलाई निकै गौरवानुभूति हुँदोरहेछ । केही समयपछि कार्यक्रम सुरु भयो ।
कार्यक्रम सकिएपछि 'झमक घिमिरेकोमा सानो कार्यक्रम छ बहिनी जानुपर्छ है ।' भनेर गोविन्ददाजुले भनिरहनु भएको थियो । गोविन्ददाजुलाई कार्यक्रम सुरु हुनअघि एक झलक देखेको थिएँ त्यसपछि देखिनँ । उहाँहरु गइसक्नु भएको मैले अनुमान लगाएँ । जगदीशदाइसँग झमक घिमिरेकोमा जाने कुराअगाडि भएकोले म निर्धक्क कार्यक्रमभरि बसेँ किनभने जगदीशदाइ मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रम सकिएपछि उहाँसँग जाउला भन्ने अघि गरेको निर्ण्रय मलाई बल्छी बनाएर अल्झाइ रहेको थियो ।
कार्यक्रम सकियो । म केहीसमयअघि निस्किएर खाजा खाएर जान तयार भएँ । कार्यक्रम सकिएपछि जगदीशदाइ बाहिर निस्किनु भयो । तुलसीदाइसँग भेट भयो । मैले उहाँलाई 'झमक घिमिरेकोमा जानुहुन्छ दाइ ?' भनेर सोधेँ उहाँले 'अहँ, मलाई निम्तो छैन भन्नुभयो ।'
एकछिन पछि जगदीशदाइ मनिर आउनुभयो । मैले भनेँ- "दाइ, जाने हो?"
उहाँले भन्नुभयो- "तपाईले झमककोमा देख्नु भएको छ ?" मैले 'अँह देखेको छैन' भनेँ । उहाँले फेरि भन्नभयो - "देख्नु भएको छैन भने चढनुहोस् गाडीमा सँगै जाऔ ।"
जगदीशदाइले यसो भन्नुहुदा मलाई कताकता नरमाइलो लाग्यो । आखिर मैले देखेको भएपनि 'जाऔँ सँगै' भन्दा के हुन्थ्यो ?
अहिले मेरो मन राजनीति विचारधारा नमिलेर दुइ गुटमा बाँडिएझैँ बाँडियो । विपक्षी मनले भन्यो- "देखिस् शर्मिला, तँ 'अर्न्तमनको यात्रा' पढेर खूब फ्यान हुन्थिस् नि जगदीश घिमिरेको, जगदिश घिमिरेलाई आदर्श व्यक्तिको रूपमा मान्थिस् नि देखिस् । आखिर तँ पनि त सानो तिनो साहित्यकारको परिचय पाएको मानिस हो ठाउँ देखे पनि नदेखे पनि एकै ठाउँ जाने सँगै जाऔँ भनेको भए के हुन्थ्यो ?"
पक्ष मनले भन्यो- "नकरा जो पायो त्यही अपरिचित मानिसलाई जाऔ कसले भन्छ र ?- फेरि जगदीशदाइसँग मेरो खासै हिमचिम पनि छैन । यस्ता झिनामसिना कुराले मेरो दिमाग खराब नगर ।"
विपक्षी मनले भन्यो- "झिना मसिना कुरा भन्छेस् ! यही झिनामसिना कुरामा जीवनको गाडी चलिरहेको हुन्छ तै भन्थिस्, मेरो लघुकथा 'झिझाको कथा'मा जीवनको ठूलो दर्शन लुकेको छ भनेर कसरी खोक्थिस् । यत्रो ठूलो जीवनलाई झिझाले मूढो सल्काएझैँ सानातिना कुरा भनौ झिनामसिना कुराले सल्काइरहन्छ भनेर । खोई तेरो दर्शनले हावा खायो त ?"
फेरि पक्ष मनले भन्यो- "नकरा, तँ पनि ठाउँ वेठाउँ यस्ता कुरा ल्याएर टाउको दुखाउँछेस् । जगदीशदाईले यति भएपनि आफ्नो साथमा मलाई ल्याउनु भएको छ । नत्र म कति दुःख पाउँथे । यस्तो सुविधा जनक गाडीमा सजिलो पुग्न पाएको छु । चुप लाग् ।"
गाडीमा कुनै हिन्दी गजल लागेको थियो । विपक्षी मनले भन्यो - "के यस्तो अल्छी लाग्दो गजल लगाएको होला ।"
जगदीशदाइले विपक्ष मनको कुरा बुझेझैँ ड्राइभरदाइलाई गजल बन्द गर्न लगाउनु भयो । मलाई अचम्म लाग्यो ।
जगदीशदाईले खाना गाडीमा ल्याउनु भएको रहेछ । खाना खाइसकेर मसँग बोल्न मूडमा देखेर होला मेरा पक्ष र विपक्ष मनले केही समयको युद्ध विरामको घोषणा गरे ।
जगदीशदाइ महादेवथान कहाँबाट जाने भनेर ड्राइभरदाइसँग सल्लाह गर्न थाल्नु भयो । उहाँहरू सल्लाह गर्न थाल्नु भएको थाहा पाएपछि मैले झसङ्ग भएर सोधेँ- "हामी झमक घिमिरेको घर जाने हो दाइ ?"
जगदीशदाइले भन्नुभयो- "हो । तपाईँले देख्नु भएको छ ?'
मैले भनेँ - "अँ देखेको छु ।"
गोविन्ददाइले 'झमक घिमिरेको घरमा जानुपर्छ' भन्ने कुराले अहिले म झल्याँस्स भएँ । अघि त मैले जगदीशदाइलाई ढाटेको जस्तो भयो । मैले जगदीशदाइलाई स्पष्टीकरण दिँदै भने- "मैले त कतै होटलमा कार्यक्रम होला भन्ने सोचेको थिएँ दाइ । कस्तो भुसुक्क बिर्सेछु ।"
जगदीशदाइले भन्नुभयो-"राम्रै भयो अब हामीलाई बताउनुहोस् न कताबाट जाने भनेर ।"
मलाई अहिले निकै लाज लागेर आयो । मेरा दुइ मन फेरि युद्धको घोषणा गरेर मनो युद्धका लागि तम्तयार भए ।
पक्ष मनले भन्यो- "देखिस् म कति झुट भएँ । मैले अघि ढाटेजस्तो भयो । मानिसका मनस्थिति सधै एउटै कहाँ हुन्छ र ?
पक्ष मनले भन्यो- "यो ढाटेको हो र? बिर्सेपछि के लाग्छ । मान्छेले बिर्सन पाउदैन र? यदि नबिर्सेको भए जगदीश दाईले नल्याउन सक्नुहुन्थ्यो अनि जगदीश दाइलाई ठाउँ नचिनेर आपत पर्न सक्थ्यो । एक प्रकारले राम्रै पनि त भयो ।"
पक्ष मनले भन्यो- "भो भो छोड दे । जगदीशदाइले कुन मुडमा भन्नुभएको थियो अब त फिलिङ्ग गर्नुभयो होला । नकरा अब म जगदीशदाइसँग केही समय कुरा गर्छु ।
जगदीशदाइले मलाई त्यति चासो दिनुहुन्न किनभने उहाँलाई मेरो बारेमा त्यति थाहा छैन । फेरि आफै विरामी र प्रशंसकहरूको त्यत्रो धुइरोमा मजस्ता कति हुन्छन् कति ? कतिलाई ठम्याउनु ? मैले मेरो पुस्तक 'समयको क्यानभासमा' उहाँलाई धेरै अघि दिएको थिएँ । तर उहाँले यस बारेमा केही भन्नुभएको थिएन ।
सायद पढनु भएको थिएन होला । नत्र पढनुहुने जति धेरैले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै फोनबाट, एसएमएसबाट, भेट हुँदा आफूले पढन थालेपछि छोडन नै मन नलागेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । सायद जगदीशदाइले पनि प्रेरणास्वरुप केही वाक्य भन्नुहुन्थ्यो होला । तर उहाँ यी सब कुराबाट अनविज्ञ हुनुहन्थ्यो । र्सवप्रथम त उहाँले मेरो पुस्तक नै पढनुभएको थिएन ।
मैले दाइको ध्यान आफूतिर आकर्षण गर्दै संवादको ढिकुटी फोडेँ - "दाइको सबै पुस्तक मैले पढेको छु । मलाई निकै मनपर्छ ।"
यस अभिव्यक्तिले जगदीशदाइ अलिक पगर्नु भएछ क्यार र मेरो बारेमा जानकारी लिन थाल्नु भयो । मैले मेरो पहिलो पुस्तकले पुरस्कार पाएको सन्दर्भ उघारेँ । सामान्य जानकारी बताएँ । अरू कुरा भन्नु छोडे पनि सधै रटन लगाउने एसओएसको जागिर छोडेर तीन वर्षेखि साहित्यमा समर्पित भएको कुरा भन्न पटक्कै छुटाइनँ । उहाँले सामान्य प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
जगदीशदाइसँगको मेरो वार्तालापमा अवरोध ल्याउन विपक्षी मनले बेलाबेलामा धम्की दिँदै थियो । तर जतिसुकै विरोध, धम्की, आक्रमण भएपनि जगदीशदाइप्रतिको मेरो आर्दश र आस्था कहित्यै पग्लने छैन । नेपालमा मैले मान्नुपर्ने थोरै आदर्श व्यक्तिमा उहाँ पर्नुहुन्छ । उहाँले माओवादीले काठमाडौ कार्यकर्ता ल्याएर गरेको बन्दको बेला टि.भीमा दिनु भएको इन्टरभ्युले मेरो हृदय हल्लिएको थियो । उहाँको भावुक र संवेदनशील विचारले म निकै मर्माहत भएको थिएँ ।
फेरि सोही दिन म श्रीमानसँग काठमाडौँ मोडल हस्पिटल जानुपरेको थियो । हस्पिटल पुग्दा हस्पिटलको करिडर, आँगनभरि अस्थागी बेड बनाउँदै घाइतेहरुलाई रगतको धारा बगाउँदै ल्याएको दृश्यले म अवाक् बनेको थिएँ । त्यो बेला प्रदर्शनी मार्गमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच जोडदार भिडन्त भइरहेको थियो । धेरैजसो घाइतेहरुलाई सोही हस्पिटलमा ल्याएर उपचार गरिदै थियो । ती घाइतेहरुको अवस्था देखेर मलाई राजनीत्तिप्रति नै घृणा लागेको थियो । गाउँघरको सोझासिधा जनतालाई काठमाडौँ ल्याइ एउटा पालको भरमा राखिएको थियो । कतिदिन देखि ननुहाएका, लुगा पनि नधोएका, कपाल पनि नकोरेका ती घाइतेहरु परदेखि नै डुङ्डुङ्ती गन्हाइरहेका थिए । बेलुका जगदीशदाइको इन्टरभ्यु सुन्दा त्यो दृश्य झलझली आँखामा आएको थियो अनि मलाई मेरो एउटा मेरो काल्पनिक कथा 'के सारो हाउ' याद आएको थियो । जुन कथामा मैले नेपालीको भाग्य किन यति सारो भयो भनेर काल्पनिक कथा बुनेको थिएँ । साँच्चै त्यो बेला एउटै नेपालीआमाका सन्तान हामी सुकिलामुकिला र झुत्राझाम्रामा विभाजित भएका थियौँ । मलाई त्यो बेला अति सुरक्षित मानिने काठमाडौ शहर पनि असुरक्षित महसुस भएको थियो । त्यसबेला राजनीतिकसंकटले कस्तो मोड लिने हो भन्ने निकै त्रास जनतामा थियो । तर पछि त्यो समस्या कुनै ठूला दुर्घटना नभई टर्‍यो । त्यो बेला जगदीशदाइ जस्ता बुद्धिजीवीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण थियो ।
त्यस्तै समाजसेवाको क्षेत्रमा उहाँले दिनु भएको योगदानलाई म विशिष्ट मान्छु । 'अर्न्तमनको यात्रा' पढदा तामाकोशी समाजसेवाबाट गर्नु भएको सेवाको वर्णन पढ्दा म भावविभोर भएको छु । पुट्टापर्ती जाँदा साइबाबाले त्यस क्षेत्रमा गर्नुभएको समाजसेवाबाट म अत्यन्त प्रभावित भएको थिएँ । त्यस बेला मैले सोचेको थिएँ 'हाम्रो देशमा पनि यस्ता भगवान् भनेर पूजा गरिने समाजसेवी होलान् त ' पछि 'अर्न्तमनको यात्रा' पढेपछि मैले उहाँलाई प्रतिस्थापन गरेको थिएँ । अनि मनमनै मन्त्र जपेको थिएँ - "ओहो नेपालमा साइबाबा भन्न मिल्ने मान्छे रहेछन् । यस्ता महान् व्यक्तिको दर्शन गर्न पाइएला र ?"
अहिले तिनै महामानवको साथमा हुदाँ पक्ष मन निकै गमक्क परेको थियो ।
अर्न्तमनको यात्राको साहित्यिक कलात्मकता, मृत्युबोधको चिन्तन, दर्शन र लेखन शैलीले मलाई उहाँप्रतिको आर्दशलाई चुल्याएर सगरमाथा पुर्‍याएको थियो । दुइ, तीन पटक पुस्तक पढेर भावुक हृदय थाम्न नसकेर मैले एउटा लामो मेल लेखेर झण्डै तीन वर्षअघि पठाएको थिएँ । तर दाइको धेरै प्रशंसकको मेलको लाइनमा मेरो मेल बाटो विराएको यात्री भएको थियो । किनभने मैले मेलको कुनै प्रतिउत्तर पाइनँ ।
जगदीशदाइसँगको मेरो अर्को सस्मरण गुञ्जन पुरस्कार पाउँदाको क्षण सचित्र भएर मेरो सम्झनाको क्यानभासमा अहिले उत्रियो । गुञ्जन पुरस्कार लिनेबेलाको क्षण दाइप्रतिको आस्था र श्रद्धाले त्यो पुरस्कार दाइको हातबाट नै पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आत्माकाङ्क्षाको पालुवा मभित्र पलाएको थियो । जसलाई मैले सभाध्यक्ष दिदी गीता केशरीको सामु यसरी फक्राएको थिएँ -"दिदी जगदीशदाईलाई मञ्चमा बोलाऔ न ।"
दिदीले भन्नुभयो-"मञ्चमा ठाउँ नै छैन बहिनी ।"
एकछिन पछि दाजु उठेर हिँडनुभयो । मेरो प्रतिरुप दाइको पछिपछि लागेर 'दाइ, पुरस्कारको समयभरि बस्नुहोस् न ।' भन्न पुग्यो । तर त्यो त प्रतिरुप थियो । त्यो प्रतिरुपको आवाज निस्क्रिय भएर मतिर नै फर्कियो । मेरो आकाङ्क्षाको पालुवा फुल्न नपाई असम्भावनाको आँधीले हुत्याइदिएको थियो ।
यस्तो महान् र आर्दश व्यक्तिको छवि बनेको मेरो हृदयले जगदीशदाइप्रति नकरात्मक धारणा कहिल्यै पाल्न सक्दैन । मेरो पक्ष मनको यिनै विचारको ब्रहृमस्त्रले विपक्ष मनलाई पराजित गरिसकेको थियो । अहिले दुवै बीच शान्तिसम्झौता कायम भइसकेको थियो । आदर्श जहिले पनि आदर्श हुन्छ । सत्य जहिले पनि सत्य हुनुपर्छ यो मेरो मान्यता भनौ वा दर्शन भनौ जे भने पनि यो मसँगै बाचिरहने मेरो अमर विचार हुन् ।
अहिले गाडी कोटेश्वर आइसकेको थियो । मैले महादेवथान जाने बाटो बताए । गाडी सोही अनुरुप अगाडि बढ्यो ।
उहाँ मोबाइलमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो- "म एक जना बहिनीसँग आउदै छु । उहाँले देख्नु भएको छ रे' ।" मलाई लाग्यो उहाँ गोविन्द दाइसँग बोल्दै हुनुहुन्छ अनि मलाई भन्नु मनलाग्यो - 'दाइ म शर्मिलाबहिनीसँग आउँदै छु भन्नुहोस् न ।'
तर मलाई उहाको संवादलाई विग्रह गर्न मन लागेन म चुप लागेँ ।
महादेवथानमा गाडी रोकाएर हामी झमक घिमिरे प्रतिष्ठान जान आरालो लाग्यौँ । "तपाईँ नभएको भए म कहाँ भटकिन्थे होला ।" दाइले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । म नतमस्तक भएँ । दाइको लागि यति गर्न सकेकोमा मनमनै म ज्यादै हर्षित थिएँ ।
झमक घिमिरे प्रतिष्ठानमा गोविन्ददाइ, कुमारदाइ र अन्य साहित्यकारहरू झमकघिमिरेको साथमा प्रतिष्ठानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहनु भएको थियो । हामी पनि सहभागी भयौँ ।
कार्यक्रम सकेर हामी सबै बाहिर निस्क्यौ । विदावारीको व्यस्ततामा गोविन्दाजुले जगदीशदाइ 'कसरी आइपुग्नुभयो?' भनी सोध्नुभयो । किनभने गोविन्ददाजुलाई पनि त्यो बहिनी को होला भन्ने जिज्ञासाले निकै लखेटेको हुनुपर्छ । उहाँले फेरि पनि भन्नुभयो- "एकजना बहिनीसँग आएँ ।" घरजान को कताबाट जाने भन्ने व्यवस्थापन कार्य सकिएपछि जगदीश दाइ र म महादेवथानको उकालो लाग्यौ । एकछिनपछि गोविन्ददाजु आउनुभयो । म पछाडिपटि्ट थिएँ । गोविन्ददाजुले अहिले पनि सोध्नुभयो - "तपार्इँ यो बाटो कोसँग आउनुभयो ?"
जगदीशदाईले अहिले पनि 'एउटा बहिनीसँग आएँ ' भन्नुभयो ।
मलाई लाग्यो जगदीशदाईलाइ अझै पनि मेरो नाम थाहा थिएन । सायद गोविन्ददाजुले पनि यो सस्मरण पढेपछि मात्र त्यो बहिनी म हुँ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ । तर यथार्थमा उहाँले थाहा पाइसकेको पनि हुनसक्छ । तर मेरो अर्न्तर्मनको यात्रामा यही विचार कोरिएको छ । मेरो साहित्यिक यात्रामा यो कुरा रहस्यमय भएर रहनेछ यदि त्योबेला जगदीशदाइलाई मैले देखेको छु भनेको भए आफ्नो साथमा ल्याउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो । किनभने उहाँलाई बाटो थाहा नहुने होइन थाहा हुने मान्छे चाहिएको थियो र मैले कार्यक्रम यो ठाउँमा हुदैछ भनेर नबिर्सेको भए के हुन्थ्यो ?